ဝင်းနဲ့ဇော် သေဒဏ် လွတ်မြောက်ရေး အတွက် အလားအလာကောင်းများ ရှိ တယ် ဟု ရှေ့နေ ဦးအောင်မျိုးသန့် ပြောကြား
ဝင်းနဲ့ဇော် သေဒဏ် လွတ်မြောက်ရေး အတွက် အလားအလာကောင်းများ ရှိ တယ် ဟု ရှေ့နေ ဦးအောင်မျိုးသန့် ပြောကြား ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်း၊ ဆူရတ်ဌာနီခရိုင်ရှိခိုတောင်ကျွန်း (လိပ်ကျွန်း)တွင် ပြီးခဲ့သော ၂၀၁၄ ခုနှစ် ကုန်ပိုင်းက ဗြိတိန်နိုင်ငံသား (၂) ဦးဖြစ်သော – Hannah Witheridge ၊ (၂၃)နှစ်နှင့် David Miller ၊ …
မိန်းမကိုယ် ယားယံခြင်း က တော်တော်ခံရခက်ပြီး ဆိုးရွားတဲ့ အရာတစ်ခုပါပဲ ။ ဒီလို ယားယံခြင်းကြောင့် အဆင်မပြေ ဖြစ်မှုတွေ များစွာ ကြုံတွေ့ရပါတယ် ။ မိန်းမကိုယ် ယားယံခြင်းဟာ ရောဂါ မဟုတ်သော်လည်း အခြားရောဂါ တစ်ခုခု၏ လက္ခဏာတစ်ခုတော့ ဖြစ်နေနိုင်ပါတယ် ။ မိန်းမကိုယ် ယားယံရတဲ့ အကြောင်းအရင်းတွေကတော့ ၁ ။ ဘတ်တီးရီး …
ချွေးပေါက်တွေ အရမ်းကျယ်နေလို့ သင် အရမ်းစိတ်ညစ်နေပါသလား။ လုံးဝ စိတ်မညစ်လိုက်ပါနဲ့။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ အခုပြောမယ့်နည်းလမ်းလေးက ချွေးပေါက်ကျယ်တဲ့သူတွေကို အကောင်းဆုံး ပြုပြင်ပေးမယ့် နည်းလမ်းလေးတစ်ခု ဖြစ်နေလို့ပါပဲ။ ပြီးတော့ ဒါဟာ မိတ်ကပ်လိမ်ပြီးတော့ အဆီပြန်တတ်တဲ့ သူတွေအတွက်လည်း အရမ်းအသုံးဝင်ပါတယ်။ ပြုလုပ်ရတာလည်း မခက်ပါဘူး။ အင်မတန် လွယ်ကူ ရိုးစင်းပါတယ်။ အသုံးပြုမယ့်ပစ္စည်းကလည်း အရမ်းမခက်ပါဘူး။ ကြက်ဥအကာကို သုံးလိုက်ရုံပါပဲ။ ဒါပေမယ့် …
“မျက်နှာပြုပြင်မှုခံယူပြီးနောက် မိတ်ကပ်လိမ်းဖို့မလိုအောင် နုပျိုသွားတဲ့ မြတ်ကေသီအောင်” မြတ်ကေသီအောင်ဟာ အနုပညာလောကမှာ သရုပ်ဆောင်ကောင်းတဲ့ သူတစ်ယောက်ဖြစ်တာကြောင့် ပရိသတ်တွေရဲ့ ဝန်းရံမှုကို တခဲနက်ဆိုသလို ပိုင်ဆိုင်ရရှိခဲ့တဲ့ သူတစ်ယောက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ မြတ်ကေသီအောင်ကတော့ နိုင်ငံကျော်သရုပ်ဆောင်တွေထဲက တစ်ယောက်အပါအဝင်ဖြစ်ပြီးတော့ အကောင်းဆုံးအကယ်ဒမီဆုကို “ရင်ထဲက ဆောင်းရာသီ”ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားဖြင့် ထိုက်ထိုက်တန်တန် သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့သူတစ်ယောက်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိမှာလည်း “အထက်တန်းစား”ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားမှာ လူငယ်သရုပ်ဆောင်တွေဖြစ်တဲ့ နေတိုး၊ညီထွဋ်ခေါင်၊သူရလင်း၊ပိုးအိအိခန့်တို့နဲ့အတူ တက်ညီလက်ညီနဲ့ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ …
အနာဂတ်ရဲ့လူငယ်တွေ အလိမ်ခံနေရတာ မြင်လို့မကောင်းဖူး(ရုပ်သံ)
အနာဂတ်ရဲ့လူငယ်တွေ အလိမ်ခံနေရတာ မြင်လို့မကောင်းဖူး(ရုပ်သံ) ဒီဗွီဒီယိုဖိုင်ကိုတော့ Kyaw Soe Oo အကောင့်ကနေ တင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်…. သူတင်ထားတာကတော့ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါတယ်… “တောသားတွေ ဂျင်းထည့် ခံရတယ် ပြောရင် အဆဲခံနိုင်တယ် အနယ်နယ် အရပ်ရပ်မှာ ဒီလိုပဲ လုပ်နေတာ ကြည့်လိုက်ဦး လူငယ်တွေ ခံနေရတာ ဒီဖြစ်စဉ်က လှိုင်သာယာမှာ” ဆိုပီး တင်ထားတာပါ…။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတာတော့ video …
အလုပ်မှာရော ဂုဏ်သိက္ခာမှာပါ ထိခိုက်လို့ တရားဝင် ကိုယ်တိုင်တောင်းပန်လာမှ ကျေအေးပေးမယ်ဆိုတဲ့ ဒေါက်တာ မြ၀တ်ရည်….(ရုပ်သံ)
အလုပ်မှာရော ဂုဏ်သိက္ခာမှာပါ ထိခိုက်လို့ တရားဝင် ကိုယ်တိုင်တောင်းပန်လာမှ ကျေအေးပေးမယ်ဆိုတဲ့ ဒေါက်တာ မြ၀တ်ရည်….(ရုပ်သံ) သာသနာရေးဝန်ကြီးသမီး ဒေါ်နှင်းစံပါယ်အောင်ကိုအား ဒေါက်တာမြ၀တ်ရည်က အလုပ်မှာရော ဂုဏ်သိက္ခာမှာပါ ထိခိုက်လို့ တရားဝင် ကိုယ်တိုင်တောင်းပန်လာမှ ကျေအေးပေးပါမယ်ဆိုပီး ဗွီဒီယိုဖိုင်လေးထဲမှာ ပြောပြထားပါတယ်…။ အပြည့်အစုံကိုတော့ ဗွီဒီယိုဖိုင်လေးထဲမှာပဲ ကြည့်ရှုလိုက်ကြပါ…။ video ဖိုင်ကို အောက်ဆုံးတွင် ဖော်ပြထားပါသည်…။ အလုပ်မှာရော ဂုဏ်သိက္ခာမှာပါ ထိခိုက်လို့ …
ခေါင်းသိပ်ကိုက်ပါလျင်(ခေါင်းခဏဏကိုက်နေသူများအတွက် လက်တွေ့နည်းလမ်းကောင်း) နည်းလေးက အမှန်လွယ်သလိုတကယ်ပဲထိရောက်ပါသည်။ ထူးထူးထွေထွေလုပ်စရာလည်းမလိုပါ။ လူတိုင်းလက်တွေ့စမ်းကြည့်နိုင်တဲ့နည်းပါ။ ခေါင်းတစ်ခြမ်းကိုက်ပါက ကြက်သွန်ဖြူတစ်ဥ၊တစ်မွှာကို ခွာပြီးထုထောင်းပါ ပြီးလျင်စက္ကူပါးလေးတွင် အစေးကိုသုတ် လိမ်းပြီး ခေါင်းကိုက်သည့် နားထင်ဘက်တွင် ကပ်ထားလိုက်ပါ။ ခေါင်းနှစ်ခြမ်းစလုံးကိုက်ပါလျင် နားထင်နှစ်ဘက်လုံးကို စက္ကူပါးလေးကပ်လိုက်ရုံပါပဲ..။ချက်ချင်းကို ချွေးတွေပွင့် ထွက်လာပြီး ခေါင်းကိုက်ခြင်းဝေဒနာ သက်သာပျောက်ကင်း သွားပါလိမ့်မည်။ နက္ခတ္တရောင်ခြည်မဂ္ဂဇင်းမှရသော နည်းလမ်းဖြစ်ပါသည်။ ဆေးဝါးဝယ်ယူရန်ခက်ခဲသူများ၊ဆေးရုံဆေးခန်းပြရန် ခက်သူတို့အဖို့ အလွန်သုံးဝင်ပြီး အိမ်တိုင်းတွင်ရှိနေတတ်သော …
ကိုယ်ဝန်ကို ချစ်သူက တာဝန်မယူနိုင်တဲ့ အပြင် သူ့အပေါင်းအသင်းများနဲ့ ဝိုင်းဝန်းရိုက်တာခံရတဲ့ ၁၈ နှစ်အရွယ် မိန်းကလေး
ဆယ်ကျော်သက်ဖြစ်တဲ့ ၁၈ နှစ်အရွယ်မိန်းကလေးဟာ ချစ်သူနဲ့လက်မထပ်ရသေးခင် အတူနေထိုင်ပေါင်းသင်းခဲ့ပြီး ယခုဆို ကိုယ်ဝန်ငါးလရှိနေပြီဖြစ်ကြောင်း The Star သတင်းဝက်ဘ်ဆိုက်မှာ ဖော်ပြသွားခဲ့ပါတယ်။ ဖြစ်ရပ်ကတော့ Setapak က ကောလိပ်ကျောင်းရဲ့အနောက်ဘက်မှာ ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း သိရပါတယ်။ ဖြစ်ချိန်ကတော့ စက်တင်ဘာလနှစ်ရက်နေ့၊ မနက် ၂ နာရီခွဲ တနင်္လာနေ့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ လူငယ်သုံးဦးဟာ မိန်းကလေးကို ကောလိပ်ရဲ့အနောက်ဘက်လမ်းကို ခေါ်ဆောင်သွားပြီး မာကျောတဲ့တုတ်တွေနဲ့ …
ဗစ်တိုးရီးယား လေးကို အမှီပြု လုပ်စားရတော့မယ် လို့ တရားဝင် ဝန်ခံလိုက်တဲ့ ဦးသက္ကမိုးညို
လက်ရှိ မှာ ဗစ်တိုးရီးယားလေး ဘက်ကနေ ကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေသူတွေ ထဲမှာ ဦးသက္ကမိုးညိုလည်း ထိပ်ဆုံးက ပါဝင်နေပါတယ်။ ဦးသက္ကမိုးညို တစ်ယောက် ဗစ်တိုးရီးယား အမှီပြု လုပ်စားနေရပါပြီ လို့တရားဝင် ဝန်ခံလိုက်ပါတယ်။ ဦးသက္ကမိုးညို က” ပြောစရာ ရှိတာ ရှင်းအောင် ပြောရပါမယ်။ ကျွန်တော် အရင်ကတည်းက social influencer လုပ်ပါတယ်။ အခုမှ လာအပ်ထားသူတွေ …
ပိုင်တံခွန်က မြူဆွယ်တာပါဆိုတဲ့ ဖွေးဖွေး၊သူမချစ်သူနဲ့ နှစ်ကိုယ်ကြားစာတွေပေါက်ကြား ရုပ်သံဖိုင်
ပိုင်တံခွန်က မြူဆွယ်တာပါဆိုတဲ့ ဖွေးဖွေး၊သူမရဲ့ချစ်သူနဲ့ နှစ်ကိုယ်ကြားက စာတွေ ပေါက်ကြား ရုပ်သံဖိုင် ပိုင်တံခွန်က မြူဆွယ်တာပါဆိုတဲ့ ဖွေးဖွေး၊သူမရဲ့ချစ်သူနဲ့ နှစ်ကိုယ်ကြားက စာတွေ ပေါက်ကြား ရုပ်သံဖိုင်1 ပိုင်တံခွန်က မြူဆွယ်တာပါဆိုတဲ့ ဖွေးဖွေး၊သူမရဲ့ချစ်သူနဲ့ နှစ်ကိုယ်ကြားက စာတွေ ပေါက်ကြား ရုပ်သံဖိုင်2 ပိုင်တံခွန်က မြူဆွယ်တာပါဆိုတဲ့ ဖွေးဖွေး၊သူမရဲ့ချစ်သူနဲ့ နှစ်ကိုယ်ကြားက စာတွေ ပေါက်ကြား ရုပ်သံဖိုင်3 ပိုင်တံခွန်က …